बाँच्नका लागि माटो खान्छन् हाइटीका गरिब (फोटो कथा)
एजेन्सी / माटो खाएर बाँचेको सुन्दा अचम्म लाग्नसक्ला । तर, हाइटीको यो सत्यकथा अहिले इन्टरनेटमा भाइरल बनेको छ । हाइटीका बालबालिकाहरुले माटो खान इन्कार गर्दा बाबु–आमा विश्वका थुप्रै बालबालिका भोकका कारण मृत्युवरण गर्न बाध्य...
कुन बार जन्मेकाे मान्छे कस्ताे स्वभावकाे जान्नुहाेस्
धेरै मानिसहरुको विश्वास छ कि जन्मेको महिना, गते, समय अथवा पलले मानिसको जीवनमा निकै नै प्रभाव पार्ने गर्दछ । यसका साथसाथै दिनको असर पनि जीवन र व्यक्तित्वमाथि हुने गर्दछ, त्यसकारण त आजकालका मानिसहरु आफ्ना...
आदित्यलाई अमेरिका लगिँदै, जानुअघि लेखे : ठीक हुने पूरा विश्वास छैन
६ साउन, काठमाडौं । आश्चर्यजनक क्षमतायुक्त बालक आदित्य दाहाललाई उपचारका लागि भोलि (बिहिबार) अमेरिका लगिँदैछ । शारीरिक रुपमा अशक्त उनको उपचार नेपालमा सम्भव नभएपछि अमेरिका लैजान लागिएको हो । अमेरिकी दूतावासले आदित्य र उनका बुवा-आमाको पासपोर्टमा मंगलबार...
गुडिरहेकाे कारमै अामाले यसरी जन्माइन् सन्तान …[भिडियाे]
निर्वस्त्र मोडेलका जिउमा कलाको उत्कृष्ट नमूना (फोटोफिचर)
साउन । सुन्दरीहरुका निर्वस्त्र जिउमा जल, स्थल, तेज, वायु र आकाश अर्थात् सम्पूर्ण पञ्चमहाभूत । निर्वस्त्र सरीरमा वास्तविक प्राकृतिक छटा स्थापित गर्नु कुनै चानचुने कल्पना तथा कलाको खेति होइन । अमेरिकाका एक जना कलाकारले निर्वस्त्र...
यी हुन् दिमाग नै हल्लाउने २० वैज्ञानिक तथ्य जानीराखाैं
काठमाडौँ, २८ असार । विज्ञानले चमत्कार गर्छ । यस्ता चमत्कार छन्, कोही चैँ पत्याउन मुस्किल छ । यस्तै, २० वैज्ञानिक तथ्य यस्ता छन्, जसले तपाईंको दिमागलाई अरु सक्रिय बनाउँछ । १. पृथ्वी प्रतिघण्टा एकहजार माइलको...
विश्वकै सबैभन्दा कम उमेरको अंगदानको दर्दनाक कथा
असार । उनको जीवन निकै छोटो भयो तर उनको ‘लिगेसी’ भने बाँचिरहनेछ । बेलायतकी एक २३ दिने बालिका अंगदान गर्ने विश्वकी सबैभन्दा कम उमेरकी मानिस बनेकी छिन् । २३ दिनकी बालिकाद्वारा अंगदान, त्यो पनि दुइवटै...
यी हुन् अल्छी मानिसले खाने ४ वटा जागिर
असार । अहिलेको दुनियामा कामको तनाव निकै बढिरहेको छ । मोटो कमाइ हुने तर परिश्रम भने कम पर्ने जागिर खाने रहर कसको पो नहोला र ? के भविष्यको करिअरको ‘स्मार्ट च्वाइस’ त्यहीँ होला जहाँ सबैभन्दा कम...
संसारभर लाेकप्रिय बनेका फेसबुकका ‘व्यङ्ग्य पात्र’ काे रियल फेस (भिडियो सहित)
असार २०, काठमाडौँ । तल दिईएको तस्बिर हेर्ना साथ तपाईले यो सामाजिक संजाल फेसबुकमा गरिने व्यङ्ग्यमा आउने मानिसको तस्बिर भनेर चिन्नु हुन्छ । तर यी व्यक्तिका बारेमा अन्य जानकारी तपाईलाई नहुन सक्छ । कतिपयले त...
सिंहले रुख चढेको देख्नुभएको छ ? हेर्नुहाेस् रुखै भरी सिंहका बथान (फोटो फिचर)
एजेन्सी । सिंहले रुख चढेको देख्नुभएको छ ? अष्ट्रेलियन फोटोग्राफर बबी-जो क्लोले तान्जानीयामा खिचेको यो तस्बिरमा सिंहहरु रुखका हाँगामा आराम गरिरहेका देखिन्छन् । उनी तान्जानीयाको सेरेङ्गेटीमा भ्रमण गर्दा यो दृष्य देखेकी थिइन् ।क्लो भन्छिन्, ‘हाम्रो...
दुनियाकै सबैभन्दा ठूलो मुख भएका मान्छे हेर्नुहाेस् तस्वीरहरु
असार । उनको नाम हो, दिनेश उपाध्याय । पेशाले विज्ञान शिक्षक हुन् । तर उनी आफ्नो पेशाले भन्दा पनि अर्कै क्षमता तथा नामले विश्वचर्चित छन् । भारतको मुम्बइका बासिन्दा दिनेश उपाध्याय विश्वका सबैभन्दा ठूलो मुख भएका...
चुम्बनले बिहे नै भा‌डिंएपछि…
भारत । भारतीय राज्य उत्तरप्रदेशको कानपुर शहरमा ब्यान्डबाजा सहित बेहुलीको घर पुगेको जन्तीले बेहुली नलिईकनै खाली हात फर्किनुपरेकाे छ । बेहुलाका बाबुले बेहुलीकी आफन्त पर्ने बहिनीलाई किस गरेको झोकमा बेहुलीले बिहे भंग भएको घोषणा गरेपछि जन्तीले...
स्तनपानका अनौठा पोज दङ्ग पर्दै हेर्नुहोस् [फोटो फिचर ]
अहिले महिलाहरु आफ्नो सुन्दरता विग्रने डरले बच्चालाई स्तनपान गराउँदैनन् भनिन्छ । बोत्तलका दुध खुवाएर महिलाहरुले बच्चाहरुलाई स्तनपान गर्न पाउने अधिकारबाट बञ्चित गरेको आरोप पनि लाग्छ । तर, शिकागोकी २५ बर्षकी फोटोग्राफर इभेट इभेन्सले विभिन्न...
यी हुन् १७ सन्तानकी ६५ बर्षे आमा
६५ वर्षमा चम्ल्याहा बच्चा रु सुन्दैमा अपत्यारिलो लाग्छ । १३ वटा सन्तानकी आमा भैसकेकी जर्मनीकी ६५ वर्षे वृद्धाले एकसाथ ४ वटा बच्चा जन्माएकी छिन् । उनले पछिल्लोपटक जन्माएका चम्ल्याहा मध्ये ३ वटा छोरा र एक...